FSX 2D Panel များ & switches များပေါ်လာထည့်သွင်းခြင်း
မေးခွန်း FSX 2D Panel များ & switches များပေါ်လာထည့်သွင်းခြင်း
1 months ago 11 တစ်နှစ် #976 by DRCW
သငျသညျယုဒလူအများကြီးရဲ့ add- ၏လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်တွင်အခမဲ့ payware နှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်ငါသိ၏။ အတော်များများကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလေယာဉ်တင် bug တွေရှိတယ်
နှင့်အခြားသူများရုံ features တွေသင့်ရဲ့ရှာနေစရာမလိုပါဘူးနေချိန်မှာသူတို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန် run အောင်အကူအညီနဲ့လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ရှိ
FMC ရဲ့ / LNAV & VNAV စနစ်များစသည်တို့ကို ... တချို့ကသင်ထိုကဲ့သို့သော GPS စနစ်အဖြစ်လေယာဉ်ဆင်းသက်ဘို့ ILS သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုစနစ်များပျောက်ဆုံးနေ /
စသည်တို့ကို switching Nav-GPS ... လေ့လာမှုချင်သို့မဟုတ်အသစ်စနစ်များကိုလေ့လာသင်ယူနာရီဖြုန်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုမျှတည်ထားပါရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သင်မည်သို့သင်ပိုမိုအဆင့်မြင့် feature များနှင့်အတူကြိုက်တယ်လေယာဉ်ကိုပိုမိုကို default လေယာဉ်ပျံကဲ့သို့ပြေးစေနိုင်သနည်း ပေါ်လာ 2D
ကျနော်တို့စတင်ခင်မှာ, သင်တို့ကိုငါမှားယွင်းမှုတစ်ခုစေလျှင်ဒါအမြဲလေယာဉ်ပျံ cfg နှင့် panel ကဖိုလ်ဒါ back up လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအထင်ကြီးရမယ်
သငျသညျမှန်ကန်သောမဟုတ်နိုင်ကြောင်း, သင်ရုံ copy & paste ကျော-Up ရဲ့ကမူရင်းအခြေအနေင်မှလေယာဉ်ပြန်သွားပါ။
FSX ဘုံ 2D ပြားကိုမျှဝေပေးသောအသုံးပြုအဓိကဖိုင်များ, အလင်းအိမ်, switches များစသည်တို့ကိုရှိပါတယ် ... အဲဒီ key ကိုဖိုလ်ဒါများမှာ
အဆိုပါ gauge folder ထဲမှာသင်ကဂျီပီအက်စ် / ရေဒီယို stack / Autopilot စနစ်များ / switch နှင့်အခြားဘုံ bit နဲ့မြေပုံရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်
sim တ္ထု၌သင်တို့၏လေယာဉ်များမှဤအချက်အလက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကြောင်း XML ကိုနှင့် DLL file တွေကိုနှင့်အတူပုံရိပ်တွေ။ ပထမဦးဆုံးအရာတစုံတခုကျနော်တို့
လုပျသငျ့သညျသငျသညျသူတို့အဘို့အသငျသညျမထားချင်တိုင်းအချိန်ကိုကြည့်ဖို့ရှိသည် wont ဒီတော့ထိုအပြားများအတွက် folder ကိုဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်
ထို့နောက်သင်၏ desktop ကဆွဲယူ "2DPanels" ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို Start ကို / စာရွက်စာတမ်းများ / ဖိုင်တွဲအသစ် / ညာကလစ်နာမည်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့က notepad သို့ထိုအ panel ကဖိုင်တွေကော်ပီကူးတစ်ချိန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့သင် "အဖြစ်ကောင်းစွာ Desktop ပေါ်မှာ notepad 'ဟုရှိသေချာအောင်လုပ်ပါ
သငျသညျထို့နောက်သင့် "2Dpanels" folder ကိုသို့သူတို့ကိုငါ paste ပါလိမ့်မယ်။
gauge00 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယိုအသံ, 0, 0,156,31
gauge01 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယို Nav-Comm 1, 0, 29,156,59
gauge02 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယို Nav-Comm 2, 0, 86,156,59
gauge03 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယို ADF, 0,142,156,41
gauge04 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယို DME, 0,180,156,41
gauge05 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယို Xpndr, 0,217,156,49
gauge06 = Bendix_King_Radio! Bendix-ဘုရင်ကရေဒီယိုက AP, 0,262,156,48
မှန်း ** = Cessna! Nav GPS စနစ်ပြောင်းလဲမည်, 594,162, 12, 11
Identity = 270
ပထမဦးဆုံးအပိုင်းဟာ C2 ကနေရေဒီယို stack 172D panel ကဖြစ်ပါတယ်
ဒုတိယအပိုင်းကတော့ C500 ထံမှကိုလည်း GPS2 172D panel ကဖြစ်ပါတယ်
တတိယအပိုင်း Nav / GPS ဖွင့်ပါစေသော2gauge ဟာ C172 အဘို့အကူးအပြောင်းနေကြတယ်
အဆိုပါဘွားအပိုင်း B747-400 ကနေနာရီဖြစ်ပါသည်
သငျသညျ overhead ပြားများနှင့်ပိုပြီးထိုသူအပေါင်းတို့သည်တည်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းလမ်းအပါအဝင် 2D folder ကိုပိုမိုပေါင်းထည့်နိုင်ပါတယ်
တစ်ခုတည်း folder ထဲမှာ။ ဒါဟာလေယာဉ်တင်တဲ့လေပြေကိုတည်းဖြတ်စေမည်။
အဆိုပါ sim တ္ထု / airpanes folder ကိုဖွင့် cfg ဖိုင်တွေဖြစ်ကြသည်။ အမှန်တကယ် gauge နဲ့ switches အဓိက gauge ထဲကလာ
folder ထဲမှာ FSX။ တစ်နည်းကမျိုးစုံလေယာဉ်ပျံများအတွက် shared folder ထဲမှာပြေး။
ဒီဥပမာငါတို့သည်ပုံမှန် DC3 သို့အထက်ပါအပေါငျးတို့သတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ပထမဦးစွာသင်ဖွင့်လှစ်သည့် / အဆိုပါ DC3 / Simobjects / လေယာဉ် / Douglas_DC3 / panel ကို၏ panel က folder ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
// Panel ကို Configuration file ကို
// ဒေါက်ဂလပ် DC3
// မူပိုင်ခွင့်© 2002 မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကော်ပိုရေးရှင်း။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။
Window00 = ပင်မ Panel ကို
Window01 = ရေဒီယို
Window02 = GPS စနစ်
Window03 = အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ quadrant
Window04 = လျှပ်စစ် Panel ကို
Window05 = အခြားထိန်းချုပ်မှုများ
Window06 = Mini ကို Panel ကို
ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံး Window06 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအောက်ပါ add ပါလိမ့်မယ်
Window07 = ရေဒီယို Stack
အခုဆိုရင်သင်အပိုင်း [Window06] ရှာတွေ့သည်အထိအောက်ကိုဆင်း
အနေအထား = 7
အထက်ပါ section အောက်တွင်တစ်ဦးအာကာသ Make နှင့် add
သငျသညျယခု DC3 တစ်ခု autopilot ပါဝင်သည်သောရေဒီယို Stack ကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
ဒါကြောင့်ပြီးသား (ဂျီပီအက်စ်) တည်ရှိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အတွက်ဒုတိယအပိုင်းထားရန်မလိုအပ်ပါဘူး
ရပ်တန့်များတွင်အထက်ပါရေဒီယို stack နှင့် autopilot အားဖြင့်ငါတို့သည်ယခု ILS ဆင်းသက်များအတွက်လေယာဉ်အသုံးပွုနိုငျသနညျး မပေးရသေး .... ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း DC3 2D panel ကိုတစ်ဦး switch ကို Nav / GPS တပ်ဆင်ရန်:
ဖိုင် = DC3_background.bmp
မြင်နိုင် = 1
gauge02 = Douglas_DC3! နာရီ, 67, 476
gauge21 = Douglas_DC3! rpm ပါ, 651, 578
gauge23 = Douglas_DC3! ထူးထူးအပြားပြား, 744, 578
gauge35 = SimIcons1024! Kneeboard အိုင်ကွန်, 37, 725
gauge36 = SimIcons1024! ATC အိုင်ကွန်, 60, 725
gauge37 = SimIcons1024! မြေပုံအိုင်ကွန်, 83, 725
gauge38 = SimIcons1024! GPS စနစ်အိုင်ကွန်, 106, 725
gauge39 = SimIcons1024! ဒီယိုအိုင်ကွန်, 37, 748
gauge40 = SimIcons1024! အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ quadrant ကျားကန်အိုင်ကွန်, 60, 748
gauge41 = SimIcons1024! လျှပ်စစ် Panel ကိုအိုင်ကွန်, 83, 748
gauge42 = SimIcons1024! အခြားထိန်းချုပ်မှုများအိုင်ကွန်, 106, 748
gauge43 လက်အောက်တွင်အောက်ပါ copy နဲ့ paste:
gauge44 = Lear_45! Nav GPS စနစ်ပြောင်းလဲမည်, 160, 420, 25, 40
, gauge12 = Douglas_DC3! radio_compass အစားထိုးမည် gauge177 = CessnaWAlpha! VOR582_Alpha, 12, 1, 175,579 နှင့်အတူ 151, 151
ဒါက VOR gauge နှင့်အတူရေဒီယိုသံလိုက်အိမ်မြှောင် gauge ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်ငါကအာကာသ fit မှ re-သုံးနိုင်ပါပြီ။
အခုဆိုရင်သင်တစ်ဦး DC3 အတွက် ILS ဆင်းသက်အဖြစ်တစ်ဦးကဂျီပီအက်စ် autopilot ပျံသန်းလက်တို့ကိုအခမဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်!
အဆိုပါ Nav / GPS ပြောင်းလဲမည်လေယာဉ်ရဲ့ clock ၏ညာဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် VOR1 gauge နှင့် Nav / GPS switch ကိုနှစ်ဦးစလုံး fixed နေကြတယ်
အဆိုပါ panel ကိုမှ (Up ကို Pop မဟုတ်) သငျဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ကိုသင်ချင် switches များနှင့် gauge ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ ငါရှိရာအရပ်၌သင်တို့တတျနိုငျသသူတို့ကိုနေရာချ
အခြားအ gauge အပေါ်ရှုံးနိမ့်တဲ့မပါဘဲသူတို့ကိုရှာပါ။ သငျသညျရှိပြီးသား gauge ပေါ်သူတို့ကိုနေရာချတယ်ဆိုရင်သူတို့ visable လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်
သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့ဖို့ gauge ကို click ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဤတွင်သူတို့ကိုနေရာကိုဘယ်လိုတစ်ပျက်ပြားဖြစ်ပါသည်:
1) gauge46 = Lear_45! Nav GPS စနစ်ပြောင်းလဲမည် (ဒီ gauge သူ့ဟာသူဖြစ်ပါတယ် FSX ) ကိုအဓိက gauge ဖိုင်တွဲထဲမှာ gauge တည်နေရာ
2) 160, 420, 25, 40 အဲဒီဂဏန်းကသင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတည်နေရာနှင့် gauge ၏အရွယ်အစားရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအရေအတွက်ကို 160 ညာဘက်မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းကနေအကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်
ဒုတိယအရေအတွက်ကို 420 မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကနေအောက်ခြေအထိအကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်
တတိယအရေအတွက်ကို 25 လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ဖို့ gauge ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်
အဆိုပါထွက်အရေအတွက်ကို 40 ထိပ်ကနေအောက်ခြေဖို့ gauge ၏အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်
cfg ရဲ့အပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကငါသည်ဤဖိုရမ်များထဲမှာချည်အတွက်ထား FSX အထွေထွေ "အမည်ရFSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ်
configuration ကို codes တွေကို "
ဒီလေယာဉ်ပျံနှင့်အတူပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုပါသလား? ငါ၏အချည်ထုတ်စစ်ဆေးအတွက် FSX အထွေထွေခေါင်းစဉ် (အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလေယာဉ်တစ်စင်းနှင့်အတူပျော်စရာ)
ဒီဘာသာရပ်အပေါ်သုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ သငျသညျငါသညျဤညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ 747-400 နာရီအသစ်မသွင်းခဲ့ပါဘူးသတိပြုမိကြပေလိမ့်မည်။ ငါ
ကိုယ်အဘို့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြင်ချင်တာပေါ့။ သင်ဆဲပြဿနာတစ်ခုရှိပါက reply နှင့်မှတ်မိဖို့အခမဲ့ခံစားရ
တစ်ခုသာမကောင်းတဲ့အဖြေကို "တစ်ဦးစကားမပြောနိုင်သောမေးခွန်းမထိုသို့သောအမှုကိုအ" ရှိပါသည်။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #977 by Gh0stRider203
ငါက Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့မတိုင်မီရှင်းလင်းသောဒီမဆိုဖတ်ပါ။ Excel POST!
ဘုရားသခငျသညျငါတစ်ခုခုချို့တဲ့ခဲ့သည်လေယာဉ် cuz ဒီလိုလုပ်ဖို့ခဲ့ပြီးပြီဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသိ။ တော့မကြာသေးမီကငါ Connie, အဖြစ်စွန်ငှက် 7X နှင့်အတူဤလုပ်ဖို့ခဲ့ (အနေနဲ့လုံးဝ HORRID က default autopilot သည့်! - ကြီးမြတ်လေယာဉ်ကြောင့်သော်လည်းထက်အခြား) ... ငါ၏အဖြစ်စွန်ငှက် 7x ထွက်စမ်းသပ်ပြီးကြပြီမဟုတ်သော်လည်း သေးအရမ်းရယ်ရတယ်။ အချိန်အတွက်ဖြစ်ကောင်း
ဒါဟာတော်တော်လေးသိပ်ရှည်တစီးကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်သင့်လျော်သောအဘယ်သူမျှမ autopilot ခဲ့သကဲ့သို့ငါအရမ်းရယ်ရတယ်အဆိုပါ Connie ဖို့ default အ 172 ရေဒီယို stack ကဆက်ပြောသည်။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #978 by DRCW
ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါတို့သစ်ကိုနေရဆဲကူညီဖို့ရန်လိုအပ်ပါဘူး, ငါ "မပြည့်စုံအတွက်အကြံပေး, အသိပညာကမပါဘဲများအတွက်သော့ချက်" ငါ့ကိုယ်ပိုင်စကားပုံ, ကိုးကားပါလိမ့်မယ်
1 months ago 11 တစ်နှစ် #979 by Gh0stRider203
ငါကပိုသဘောတူမဟုတ်ပါနိုင် !!!! သငျသညျတော်တော်များများကငါ့စာပုံးကိုတက်လွင့်ခြင်း, ငါ့မျက်စိဖမ်းမိပါပြီ။ onboard ကိုသင်ရှိသည်ဖို့ nice ။
1 months ago 11 တစ်နှစ် #985 by DRCW
သငျသညျအကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးပေါ့ပ်တက် autopilot ကဘာလဲဆိုတာသိ? ဒါဟာညာဘက်ဒီမှာစွန်ငှက် 50 အတွက် rikooo အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တောင်ပံကျော်ထွက်ရှာကြသည်စဉ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်လေယာဉ်ကိုထိန်းချုပ်သင်သည်နွယ်ဖွားစတင်ဖို့, သင့် Airspeed ပြောင်းလဲဦးတည်ခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသမျှသောရှုခင်းကိုခံစားဖို့ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မအကြောင်းကိုရှုခင်းနှင့်ရာသီဥတု $ 4000 နှင့်လေယာဉ်ပျံရှိသည်။ တချို့ကကြိမ်ငါ FMC running နှင့်လေယာဉ်ကုန်းပတ်အတွင်းဖြစ်ခြင်းကိုခံစား, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအပေါ်ကျွန်မခရီးသည်အဖြစ်ရှုခင်း၌ငါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုခံစားချင်တယ်။ အဆိုပါသိမ်းငှက် 50 2D autopilot ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာ။
0.198 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်